ဝဋ်လည်ခဲ့ရတဲ့ 2013 , April Fool | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Events/Fundraise » ၀ဋ်လည်ခဲ့ရတဲ့ 2013 , April Fool
Posted by etone on Apr 1, 2013 in Events/Fundraise, My Dear Diary, Relationships & Family | 15 comments
နှစ်စဉ် April Fool နေ့ ရောက်တိုင်းမှာ သူငယ်ချင်း ၊ မိတ်ဆွေ ၊ ဆွေမျိုးတွေအပါဝင် မိသားစုတွင်းက လူတစ်ဦး မဟုတ်တစ်ဦးကို ပစ်မှတ်ထားကာ ၊ ပိပိရိရိ အရူးလုပ်ပြီး စတတ် နောက်တတ်တဲ့ အကျင့်ရှိခဲ့တာကြောင့် 2013ရဲ့ April Fool နေ့ အတွက် ကျွန်မ ရဲ့ ပစ်မှတ်ထားပြီး စနောက်ခံရသူ ဘယ်သူဖြစ်မလဲ ဆိုတာ အတူနေမိသားစုက သတိထားရင်း စိတ်ဝင်တစား စောင့်ကြည့်နေကြပါတယ် ။
အသက်ရွယ်နဲ ညီမျှတဲ့ နေထိုင်မှု အကျင့် စရိုက်မျိုးရအောင် ပြောင်းလဲယူမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးနဲ့ စတဲ့ နောက်တဲ့ အကျင့်ကို တတ်နိုင်သမျှ ပြင်ပါတော့မယ်ဆိုတာမျိုးတွေးပြီး ၊ ဒီ 2013 မှာ April Fool ကို ခုတုံးလုပ်ပြီး ဘယ်သူ့ကိုမှ အရူးမလုပ် ၊ မစ မနောက်တော့ဘူးလို့ စဉ်းစားထားခဲ့ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် ယခင်နှစ်တွေကလို အထူးတလည် အကြံထုတ်ပြီး စနောက်ဖို့ မပြင်ဆင်ပဲ ၊ သာမန်အတိုင်း လှုပ်ရှားသွားလာနေပါလျှက် အိမ်က မိသားစုဝင်တွေရဲ့ စောင့်ကြည့်နေကြတဲ့ မျက်စိစက်ကွင်းမှာတော့ သံသယတွေနဲ့ပါ ။
အရူးမလုပ်တော့ဘူး ၊ မစနောက်တော့ပါဘူး တွေးထားကာမှ မနက်ဖြန် April Fool မှန်း အမှတ်ရနေမိပြန်တယ် ။ နှစ်တိုင်း လုပ်မြဲလုပ်ခဲ့တဲ့ အကျင့်တစ်ခုကို ဖျောက်ဖို့ အာရုံပြောင်းရင်း ၊ ပျင်းစရာကောင်းတဲ့ဗွီဒီယိုဇာတ်ကား တစ်ခုကို လေးတွဲတွဲစိတ်နဲ့ ထိုင်ကြည့်နေခဲ့မိတယ် ။ ဇာတ်ကားထဲက မင်းသားနဲ့ အိမ်အလည်ခဏလာတည်းတဲ့ မင်းသမီး နှစ်ယောက်တည်း ရှိနေတုန်း အိမ်ကို သူခိုးဝင်ခိုးရင်း ၊ သူခိုးက ပြန်ထွက်လို့ မရ ၊ ဒါကို မင်းသားနဲ့ မင်းသမီးက သရဲခြောက်တာလို့ ထင်ပြီး ၊ တွန့်လိန်ကောက်ကွေးနေလောက်အောင် အရမ်းကြောက်နေတဲ့ အမူရာတွေ လုပ်ပြတာကြည့်နေတုန်း …. ဗြုန်းးးးးးးးးးး ဆို မီးပျက်သွားပါတယ် ။ အရာရာမှာ အမှောင် အတိဖုံး သွားတယ် ။
တစ်ယောက်တည်း ပွစိပွစိ ရေ ရွတ်ရင်း ၊ ကြိုးစားပြီး အိပ်မယ်လို့တွေးကာ အိပ်ယာထဲ ၀င်လှဲနေခဲ့ပြန်တယ် ။ မီးပျက်တဲ့ ညတညရဲ့ ပူလောင်တဲ့ ဒဏ်က ခံရခက်လွန်းလှပါတယ် ။ ပြတင်းပေါက်တိုင်း လိုက်ဖွင့်ထားတာတောင် .. ဘယ်လိုမှ သီးမခံနိုင်လောက်အောင် အရမ်းပူလွန်းလို့ တော်တော်နဲ့ အိပ်မရခဲ့ဘူး ။ လက်နှစ်ဖက်မှာ ယပ်တောင်တစ်ချပ်စီကိုင်ပြီး မော်တာတပ်ထားသလို ထရစပ်ခပ်နေရင်းနဲ့ပဲ ဆိုးဆိုးရွားရွား ပူလောင်နေတာကြောင့် ၊ ရေထချိုးဖို့ ကြံစည်မိပြန်တယ် ။ အပူဒဏ်လျော့ဖို့ အရေး ရွှေဥာဏ်တော်စူးရောက်စွာနဲ့ ရေခဲရေနဲ့ ချိုးဖို့ စိတ်ကူးမိပါတယ် ။ ရေခဲ သေတ္တာထဲ ကြည့်တော့ ရေခဲရေပုလင်းလုပ်ထားတဲ့ 1litre ပုလင်း ခုနှစ်ပုလင်းကို အဆင်သင့်တွေ့တယ် ။ တချို့ ပုလင်းတွေက အေးခဲနေပြီး တချို့ ပုလင်းတွေက တ၀က်တပျက် အရည်ပျော်နေပါတယ် ။ ရေခဲရေ 1 litre ပုလင်း ခုနှစ်ပုလင်းက ရေချိုးဖို့ လုံလုံလောက်လောက် မဟုတ်တဲ့ ပမာဏဖြစ်တာကြောင့် ၊ ခဲနေတဲ့ ပုလင်းတွေကို သာမန်ရေနဲ့ ရောစပ်လို့ အရည်ပျော်အောင် လုပ်ရင်း ၊ ရေအေးပမာဏ များလာအောင် လုပ်ပြီး ရေချိုးခဲ့ရတယ် ။ ရေချိုးပြီးလို့ အချိန်ကို ကြည့်တော့ မနက် တစ်နာရီကျော်ပါပြီ ။ April Fool နေ့ပါလား ဆိုတဲ့ အသိက ချိုးနှိမ်ထားခဲ့တဲ့ စချင်နောက်ချင် အရူးလုပ်ချင်စိတ်က ထိန်းမရ သိမ်းမရ တဖွားဖွား ဖြစ်လာပြန်တယ် ။ ရေလည်း ချိုးထားတော့ မအိပ်ချင်သေးတာကြောင့် ၊ ဒီနှစ်တော့ တကယ့်ကို နောက်ဆုံး အကြိမ် စဦးမှ ၊ နောက်ဦးမှလို့ ဆုံး ဖြတ်ချက်ချရင်း ၊ ဘယ်သူ့ကို ဘယ်လို ဒုက္ခပေးရမလဲ စတွေးရပါတော့တယ် ။
တအိမ်လုံး ပူပူ အိုက်အိုက်ဒဏ်ကို အလူးလဲ ခံစားပြီးမှ အိပ်ပျော်နေကြရှာပေမယ့် ၊ ဒီ2013 အတွက် ပစ်မှတ်ကတော့ သူတို့ ကလွဲပြီး တခြား လူ မဖြစ်နိုင်တော့တာကြောင့် အားနာနာနဲ့ပဲ တအိမ်လုံးကို ပတ်ပြီး အရူးလုပ်ဖို့ အကြံ ထုတ်ရပါတော့တယ် ။ ဆိုးဆိုးရွားရွား ဒုက္ခပေးဖို့ မရည်ရွယ်ထားပေမယ့် ကသိကအောက် ဖြစ်အောင် လုပ်မယ်လို့တော့ ၊ ကြိုတွေးထားပါတယ် ။
ပထမဆုံး အိမ်သားအားလုံးရဲ့ သွားတိုက်သွားပွတ်တံတွေ ၊ မျက်နှာသုတ်ပုဝါတွေကို ဖွက်ပြီး ပလပ်စတစ်အိတ်တွေနဲ့ သီးသန့် တခုချင်းခွဲလို့ စက္ကူပုံးထဲ တခါပြန်ထည့်ပြီး ကုတင်အောက်မှာ ဖွက်ခဲ့ပါတယ် ။မိုးလင်းလို့ အလုပ်ခွင်ဝင်ဖို့ မျက်နှာသစ် သွားတိုက်တဲ့ အခါ ……… …. …. …….. အောင့်သီး အောင့်သက်ဖီလင်ကြီးနဲ့ နေ့တနေ့ကို စတင်ကြရမှာပါ ။
အိမ်မှာ သုံးတဲ့ ဆားပုလင်းနဲ့ သကြား ပုလင်း ထည့်ထားတဲ့ ပုလင်းပုံချင်း တူပေမယ့် အဖုံးအရောင်သာ ကွာတာကြောင့် အိုးသူကြီးလုပ်တဲ့ အဖွားကို စချင်လို့ ဆားနဲ့ သကြား ပုလင်း အဖုံး ချင်း လဲ တပ်ခဲ့ပါတယ် ။ မနက်မိုးလင်းလို့ ကော်ဖီဖျော်တဲ့ အခါပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ ဟင်းချက်တဲ့ အခါပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ အဖွား လက်စွမ်းပြတဲ့ အခါ အရသာ ထူးခြားတဲ့ အစားသောက်တွေကို အိမ်သားတွေ စားရစေဖို့ ရည်ရွယ်ခဲ့ပါတယ် ။ဒါ့ပြင် အရမ်း ရိုးအေးပြီး အယုံလွယ်တဲ့ ရှေးလူကြီးအဖွားဖြစ်သူအတွက် သနပ်ခါးဗူးထဲမှာ ကလစ်ကပြုတ်တဲ့ ကျောက်လေး ၊ လေးငါးလုံး ထည့်ပေးထားခဲ့ပါတယ် ။ သနပ်ခါးဗူးထဲက မေတ္တာလက်ဆောင် ထည့်ပေးတယ်လို့ ထင်အောင်လို့ပါ ။ ဟိုး နှစ်တွေတုန်းကလည်း ပုလဲလုံးတွေ ၊ သာမညလက်စွပ်တွေ သနပ်ခါးဗူးထဲ ထည့်ပြီး အဖွားကို နောက်ခဲ့ဖူးပါတယ် ….. ။ နောက်တိုင်းလည်း သူခံခဲ့ရပေမယ့် ဒီတခါရော ကျွန်မ အစီစဉ်တွေ အောင်မြင်ပါ့မလား ဆိုတာတော့ …….. အခုထိတော့ အဖြေမပေါ် နိုင်သေးပါဘူး ။
အမေဖြစ်သူနဲ့ ယောက်မဖြစ်သူကို နောက်ဖို့တော့ …….. သူတို့ စလင်းဘတ်အိတ်တွေထဲက ပစ္စည်းချင်းလဲ ထည့်ခဲ့တာပါပဲ ။ အပြင်သွားခါနီး အိတ်ကို မစစ်ပဲ ဒီတိုင်း ယူသွားလျှင် ကျိန်းသေပေါက် ကမောက် ကမ ဖြစ်ကြရပါတော့မယ် ။ အိမ်က လူအကုန်လုံးကို စနောက်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားတာကြောင့် ပွဲတိုင်းကျော် မပါမဖြစ် ၊ မျက်နှာ ချင်းဆိုင်တိုင်း ထထသတ်ရလေ့ ရှိတဲ့ အစ်ကိုကိုတော့ ……. သူအိပ်နေတုန်း ဘောင်းဘီ စနဲ့ အိပ်ယာခင်းကိုတွဲပြီး တွယ်ချိတ် လေးငါးခုနဲ့ တွဲချည်ထားခဲ့ပါတယ် ။ အမြဲတမ်း အိပ်ယာနောက်ကျမှ ထတတ်ပြီးကမန်းကတန်း ဗြုတ်စဗျင်းထောင်း အလုပ်သွားတတ်တဲ့ အကျင့်ရှိတာကြောင့် အလျှင်စလို အိပ်ယာ ထတဲ့အခါ ၊ အိပ်ယာခင်းလည်းပြဲနိုင်သလို သူ့ဘောင်းဘီလည်း ပြဲ နိုင်ပါတယ် ။
နောက်ဆုံးတော့ ဒုက္ခပေးစရာ တူလေးတစ်ယောက်ပဲ ကျန်ပါတော့တယ် ။ အဖေနဲ့ အမေကြားမှာ အိပ်နေတဲ့ တူလေးက စောင်ခြုံပြီး အိပ်တတ်တဲ့ အကျင့်ရှိပါတယ် ဘယ်လောက်ပူပူ ၊ အေးအေး စောင်လေးရင်ဘတ်ပေါ်ကနေ ခြုံပေးမှ အိပ်တတ်တာပါ ။ သူ့ကိုတော့ ခြုံထားတဲ့ စောင်နဲ့ပဲ ခြေထောက်ပိုင်းကို ပတ်ပြီး အောက်နားကို စောင် အထုံး လုပ်ထားခဲ့ပါတယ် ။
တအိမ်လုံးကို လှည့်ပတ်လုပ်ကြံပြီးတော့ အချိန်က မနက် လေးနာရီစွန်းစွန်း ……. ။ ခဏလောက်မှေးပြီးမှ ရုံးသွားတော့မယ်လို့ စိတ်ကးကာ ခဏမှေးရာမှ ၊ အိပ်ပျော်သွားခဲ့ပါတော့တယ် ။
စူးစူးဝါးဝါး …… မရပ်မနား နှိုးစက်က အသံကို နားထောင်ရင်း ဒါဒုတိယ အဆင့် ပေးထားတဲ့ နှိုးစက်သံလို့ အတပ်သိကာ ရုံးနောက်ကျတော့မယ်ဆိုတဲ့ အသိကြောင့် သာမန်နှုန်းထက် နှစ်ဆတင်ပြီး ဝေယျာဝစ္စတွေလုပ်လို့ အိမ်က ထွက်မယ်လုပ်တော့မှ …လွယ်နေကြ ပိုက်ဆံအိတ်မှာ ကြိုးတွေ ဖြုတ်ခံထားရတာ တွေ့ရပါတော့တယ် ။ ၀ဋ်ဆိုတာ နေ့တောင်မကူးပါပဲ ချက်ချင်း ပြန်လည်နေပါပြီ ။ သွားခါနီးလာခါနီး အချိန်မရှိရတဲ့ အထဲ ပျောက်နေတဲ့ ပိုက်ဆံအိတ်လက်ကိုင်းကြိုးတွေ ရှာမရခဲ့ပါဘူး ။ သူများတွေကို အမြဲ April Fool လုပ်ခဲ့တဲ့ အတွက်ဒီနှစ်မှာ ကိုယ်ပြန်ခံရတာပါ ။ အဲ့ဒီအချိန်မှာမှ အရင်က စခဲ့ နောက်ခဲ့တာတွေကို …. ကိုယ်ချင်းစာမိခဲ့ပါတယ် ။
တအိမ်လုံး မှာ အစော ဆုံး ထပြီး အလုပ်သွားရတဲ့ ကျွန်မကို ဘယ်သူကမှ ဖွက်ထားတဲ့ ပိုက်ဆံ အိတ်လက်ကိုင်းတွေ ပြန်ထုတ်ပေးမှာ မဟုတ်မှန်း သိတာကြောင့် လက်ကိုင်း မပါတဲ့ ပိုက်ဆံအိတ်ကိုပဲ ဗြုတ်စ ဗျင်းထောင်း ပိုက်ပြီး ၊ တွေ့တဲ့taxi ငှားလို့ ဖယ်ရီဂိတ်ကို အမှီပြေးရပါတော့တယ် ။ ဖယ်ရီဂိတ်ရောက်လို့ ကား ခရှင်းမယ်လုပ်တော့မှ ဖြုတ်ထားတဲ့ လက်ကိုင်းတွေ ပိုက်ဆံ အိတ်ထဲ အကုန် ပါလာတာ တွေ့ ရပါတော့တယ် ။ တကယ့်ကို စိတ်ခံစားမှု ပေါင်းစုံနဲ့ ပျော်ရွှင်ခဲ့ရပါတယ် ။
ကိုယ်တောင် တခါပဲ ခံခဲ့ရရုံနဲ့ အတော်လေး စိတ်ကသိကအောက်ဖြစ်ရတာ ကိုယ့်ကြောင့် နှစ်တိုင်း အမြဲ ခံနေရတဲ့ မိသားစုသာဆိုလျှင် ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးဖြစ်မိတာကြောင့် ……. အားနာ စိတ်ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် ….. ညက စနောက်ဖို့ ရည်ရွယ်ခဲ့တာတွေကိုတော့ …. အချိန်ရှားပါးခက်ခဲတဲ့အတွက် ပြန်မပြင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး ။ အိမ်ပြန်ရောက်လျှင် စိတ်ကောက်နေကြမလား ၊ရယ်မောနေကြမလားလို့ ….. တွေးရင်း …..
သေချာတာတော့ (တကယ်…. တကယ်ပါ ) နောက်နှစ် ဘယ်သူ့ကိုမှ April Fool ကို ခုတုံးလုပ်ပြီး လျှောက် မကြပ်တော့ပါဘူးလေ ……..
Happy April Fool2U All ^^
သေချာတာတော့ (တကယ်…. တကယ်ပါ ) နောက်နှစ် ဘယ်သူ့ကိုမှ April Fool ကို ခုတုံးလုပ်ပြီး လျှောက် မကြပ်တော့ပါဘူးလေ …….. ဂယ်ကြီးလားးးနော်…
နောက်နှစ် ရောက်တော့လည်း နောက်တစ်ကြံ ပေါ်လာဦးမှာပါပဲလေ။
ရုံးက ညီမလေးတစ်ယောက်လေ ဟိုးတနှစ်ကပေါ့
တစ်ရုံးလုံး လှည့်ပတ်ပြီး April fool လုပ်
သဘောတွေကျ နေရာက Bank up date သွားလုပ်ဦးမယ် ဆိုပြီး သွားလိုက်တာ
ဘဏ်ရောက်မှ ဘဏ်ပိတ်ရက်တဲ့ ပြုံးစိစိနဲ့ ပြန်လာတယ်…
ဘဏ်ပိတ်ရက်မှန်းသိပေမယ့် သတိမထားမိပဲ ဘယ်သူမှမတားမိခဲ့ကြဘူးရယ်…
နောက်နှစ် ဘယ်သူ့ကိုမှ April Fool ကို ခုတုံးလုပ်ပြီး လျှောက် မကြပ်တော့ပါဘူးလေ ……..
Happy April Fool Everyone!!!!
အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါ ကြုံတွေ့ရမယ် ဇာတ်လမ်းလေး လဲ ကြားပါရစေဗျာ :hee:
April Fool နေ့မို့ သတိနဲ့ နေနေတာ။
မနက်ပိုင်းတုန်းက အလုပ်တူလုပ်တဲ့ ကလေးမလေးက ဒီနေ့ညနေ ဆီဒိုးနားမှာ ညစာကျွေးမယ်လို့ ပြောတော့ မလာတော့ဘူးလို့ တခါတည်း ပြောခဲ့လိုက်တယ်။
ငါ မအ ဘူးဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် မာန်တက်နေတာ …
ရွာထဲရောက်မှပဲ ကထူးဆန်းရဲ့ စာဖတ်ပြီး အရူးလုပ်ခံရလို့ ခံရမှန်းမသိဖြစ်သွားတာ။ :eee:
April 1 Special offer.
Download Pro or B2B 6.5.2 for free.
We are proud to annouce that we have released the next major update to the 6.5 series.
And asaspecial offer for today only, on April 1 you can download Pro or B2B for free. We have fixed over 20 issues in CE, Pro and B2B. Change log link is on the download listing page.
DOWNLOAD PRO OR B2B FREE.
Click here to find out how to download 6.5.2 Pro or B2B for free today,
သူများတွေကို.. Shopping cart လုပ်ပေးနေကျမို့.. တခါဝယ်.. ၃-၄ရာတန်က.. အခုဖရီးမို့.. အသည်းအသန် အရုးနောက်ထဲလိုက်သွားတာ… နောက်ဆုံးမှခံလိုက်ရတယ်..
ကုမ္ပဏီလုပ်ပြီး. လိမ်တာ… :buu:
ကျွန်တော်လဲ မနေ့က April fool လုပ်လိုက်တယ်
ကိုသုဝေ …. အိမ်သူ သက်ထားကို April Fool အနေနဲ့ ညက်နှာမှာ တက်တူး ထိုးပေးလိုက်ပါလား ဟင် …
မနေ့က April Fool ကိုမေ့နေတယ်…
မှတ်မှတ်ရရ အလုပ်မှာ မနက်စောစောခေါ်အထောင်းခံရတယ်… ဒါက April Fool မဖြစ်နိုင်ဘူး…
Management Fool ပဲဖြစ်မှာ..
အော်… တချို့ရက်တွေက ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တော့သလိုပါပဲလား…
အွမ်း အေပရယ်ဖူးကို စိတ်မ၀င်စားတဲ့ အရပ်မှာနေရလို့လား မသိ။
ဘာမှတောင် မဘာလိုက်ရဘဲ အလုပ်ထဲခေါင်းနှစ်ပီးအချိန်ကုန်သွားတယ်။
ခါတိုင်း ဖုန်းနဲ့မက်စိပို့ပြီး နောက်နေကျ အိမ်ကအဒေါ်တောင် အသံမကျားဝူး။ :gee:
အိပ်ပြန်ရောက်တော့ ဘယ်လို ဖြစ်တုန်းဗျ …
စိတ်တော့ ဆိုးကြမယ် ထင်လောက်ပါဘူးရယ် ..
ဂျီးဒေါ်ကိုတောင် ပြန်စ ထားကြသေးတာပဲ ..
ရမ်းတုတ်ကျိဒါ .. ဟီး ..
အဟီး .. .ကိုယ့် အပြစ်နဲ့ ကိုယ်မို့ … ညက အိမ်ကို နောက်ကျမှ ပြန်ပါတယ် …။ (အားလုံး အိပ်တဲ့ အချိန်မှ )
အေးအေး လူလူ ဘုရားသွားနေခဲ့တာလေ …. ။ ဒီမနက် ..တင်းတော့ တင်းနေကြတယ် …. ဘာမှတော့ မပြောကြပါဘူး .. အမြဲ ခံနေကြဆိုတော့လေ … ခိခိ …..
အဆောင်မှာနေခဲ့တဲ့ ကျောင်းသူဘ၀တုန်းက ဧပရယ်ဖူးလ်ဆိုရင် စကြနောက်ကြနဲ့ ပျော်စရာကောင်းခဲ့ပေမယ့် အခုတော့ ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလို ဖြစ်နေခဲ့တာကြာပေါ့ ..
ဒါတောင်မနေ့က ကထူးဆန်း ဖူးလ်လုပ်တာ ခံလိုက်ရသေးတယ် …
ကျုပ်မှာတော့ အလုပ်တွေရှုပ်ပြီး ဧပရယ်မဖူးလိုက်နိုင်ပါဘူးဂျာ..